हिजोको दिनमा मिनिस्कर्टमा ज्योतिलाई देखेर बुरुक बुरुक जवानीको जोस् उफार्नेहरु अब उनी सारीले सबथोक छोपेर स्टेजमा आएसी के गर्छन् होला ? - Enepalese.com
हिजोको दिनमा मिनिस्कर्टमा ज्योतिलाई देखेर बुरुक बुरुक जवानीको जोस् उफार्नेहरु अब उनी सारीले सबथोक छोपेर स्टेजमा आएसी के गर्छन् होला ?
इनेप्लिज २०७४ मंसिर १८ गते १२:०० मा प्रकाशित
ज्योति तिम्रो जवानीको राप र तापमा रन्किएर मात्ने र कुरा काट्ने डाँगाडाँगीहरुको मुखमा बुजो लाइदेऊ…! भिडियो
हिजोको दिनमा मिनिस्कर्टमा ज्योतिलाई देखेर बुरुक बुरुक जवानीको जोस् उफार्नेहरु अब उनी सारीले सबथोक छोपेर स्टेजमा आएसी के गर्छन् होला ? के उनी हिजो जत्तिकै संगितको बजारमा बिक्लिन् त? बिकिन् भने त राम्रै हो तर नबिकेमा त उनको कला होईन जवानी मात्र बिक्री भएको प्रमाणित हुने भो नि त ! ‘आचि’निस्कने गरि भीडमा च्यापिएर तँछाडमँछाड गर्दै उनको जवानी खरीद गर्ने चैं को??ज्योतिको साँगितिक बजार…. बाकी भिडियोमा सुन्नु होला